UDrábské světničky - Umculo wamahhala kunye nokulandwa kwemidiya yevidiyo zakho ze-YouTube okanye iiprojekthi ze-multimedia
ikhayaCzech kwiParadesiDrábské Rooms
Drábské Rooms	Ushiye uluvo
Drábské Amagumbi kukho iintsalela nqaba original ngamaplanga kwi iibhloko yelitye lentlabathi kwi cadastral Dneboh kwisithili Mlada Boleslav, 4 km kwimpuma eMunich Hradiste. Itholakala kwindawo ekhuselekile yendawo yeBehemia eParadesi, kwintsimi yesayithi yaseYurophu iNATURA 2000 kunye nePříhrazské skály Reserve Reserve. Amandla rock yakhiwa esesiphelweni ngasentla kweqonga ekuthiwa Inqaba kwintaba ephakame malunga 370 m (iimitha 105-155 ukuhamba omlambo Jizera). Inqaba ukususela 1958 ekhuselweyo njengenxalenye lesikhumbuzo yenkcubeko ebanzi, ligubungela ebanzi indawo Castles kunye nobakhe Klamorna. Umnini welizwe elinenkqantosi yenkqantosi yiCzech Republic, ulawulo kunye nokunyamekela isikhumbuzo sinikezelwa ngamaHlathi aseCzech Republic.
Isihlalo esiqingqiweyo segama elingaziwayo, ngokutsho kweemvelaphi zakudala, ngamanye amaxesha kwakhiwa kwisithathu sesithathu se-13. ngexesha lezinto ezibalulekileyo zekolonization zamaCresscian Castles. Drábské Amagumbi elisondele Klamorna kunye zokuzifaka apha Old Castle Příhrazy ubuncinane ekuqaleni wakhonza ngokwamanqaku wabasiki, ilinde ummandla weemonki kunye inxalenye wabakhweli Pojizerské. Iziphumo ezininzi zezinto zakudala zezinto zakudala zibonisa ubukho be-castle kude kube yi-14. kwinkulungwane kwaye i-15 kuphela. Inkulungwane, xa kucingwa ukuba ibuyiselwe kwiimfazwe zaseHussite.
Ukusetyenziswa kwesithuba esikhejiweyo ngexesha lokudala lamanje liphinde libhalwe yi-petroglyphs yesiganeko. Ezinye izinto ezibhalwe kwi-16. kunye ne17. Kwiminyaka eminyaka kunye kunye nokubhalwa kwemithombo ebhaliweyo kuvumela iintlanganiso zamalungu obunyano bobuzalwana kunye nokuhlala okunokwenzeka kwabafundisi be-Utrakvistic. Amaphethelo kwezinye iibhloko ze-rock kunye ne-pre-poll ye-castle yatshintsha ukuchithwa kweebhloko ze-sandstone.
Inqaba yakhiwa ezintlanu okanye ezisixhenxe zeebhloko zedwala, ezahlukana ngamaqhekeza amancinci. Kumazinga eziliqela 15-40 m eliphezulu namawa ezigcinwe oqingqiweyo isithuba imisebenzi amabini ezahlukeneyo, iintsalela iipaseji ezintlanu oqingqiweyo iziseko ngomthi emva izakhiwo zibe sixhenxe, iibrorho umkhombe ezintlanu aqingqiweyo abubungqina okubambelela palisades ngamaplanga. Kwimiba yamatye kunokwenzeka ukuba uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uvuselele iifrikhi zokhuni. Obusa ubeko inqaba ende omkhulu somthi ukukhusela emnyango enqabeni unqunyanyiso okanye elivulekayo. Ingeniso ephakathi yayikhokelwa ukusuka empuma ukusuka kwiibhloko ezilandela i-rockpostpost. Igumbi elikhulu le nqaba liyi-chapel - igumbi elinesibingelelo esiqingqiweyo, esingabonakali kwi-1921.
UDrábské světničky yiindawo ezithandwayo zokuvakasha. Namhlanje ukufikelela kwabakhenkethi ukuze sibange rock bottom-ngumthi ochweliweyo ekusenokwenzeka 1830, lo ngezinyuko bandiselwa kwinkqubo eko zenkulungwane yamashumi amabini, i-Club Abakhenkethi Czechoslovak. Namhlanje, inxalenye ephambili yeengcambu eziphezulu zamatye e-rock zidibaniswe yinkqubo yamanqanaba kunye namadriddo (isibonelelo sesiphaluka).
Uhambo lwe-castle lukhululekile kwaye luhamba ngaphandle kwesikhokelo. Uhambo lokubona indawo luqala ngesango lokungena kwamaplanga, lilungiswe kwi-2016. Le nxalenye yesikhumbuzo iya kufumaneka kwiindwendwe ezivela kwi-1. Epreli ukuya kwi-31. Oktobha, emini, ngeemeko zemozulu.
Indlela efutshane kunazo zonke kwi-rock massif ilandela uphawu lokukhenketho oluhlaza okwesibhakabhaka ukusuka epakini yepaki eKavčina kwidolophana yaseDneboh (0,6 km). Isikhululo sikaloliwe sikufuphi kwilali Brezina kumgca no. 070 Prague-Turnov endleleni omthubi zimakishwe kude iikhilomitha Castle Rock 2,5.
Indawo yokuhlawula iDrábské světničky ifom eyingxenyana esenyakatho-ntshona yePříhrazská iIntlanzi phakathi kwekhenkethi uNa Krásné vyhlídce neKlamornou. Iimitha zamatye amabini-khilomitha zichazwe kwii-111 Rocks zeendlela ze-915 zokunyuka.
Kuzo zonke iibhloko ze-rock ezidibene neDrábské světnička ngqongquthela, yonke imisebenzi yezintaba iyanqatshelwe ukukhusela isikhumbuzo senkcubeko. Oku kusebenza kwi izinto ezidweliswe kwi-database ye-Czech iintaba Association: Drabske massif, ngokunomkhethe, umhlathi Drabske, clover-igqabi ezine nodonga ezisemantla nasempuma kwenqaba anemifanekiso.
Bresser LCD kwemakhroskophu 50x-2000x 5MPix →